Arbeloa oo loo sameeyey kabo munaasabadeed! Caawa ayuu markii ugu dambeysay u gacan haatin doonaa mucaashiqiinta Bernabeu balse maxay yihiin afarta fariin ee lagu qoray kabihiisa? – Gool FM
Arbeloa oo loo sameeyey kabo munaasabadeed! Caawa ayuu markii ugu dambeysay u gacan haatin doonaa mucaashiqiinta Bernabeu balse maxay yihiin afarta fariin ee lagu qoray kabihiisa?
Kaafi May 8, 2016
(Madrid) 08 Maajo 2015. Dambeedka Real Madrid Alvaro Arbeloa waxa uu isu diyaarinayaa ku ciyaarida kulankiisii ugu dambeeyey ee Estadio Santiago Bernabeu waxaana loo diyaariyey kabo loogu talo galay munaasaada.
Laacibka waxa uu ka soo baxay kuliyada Real Madrid balse kulanka lixda maqrinimo ee saacadda Geeska Africa laga daawan doono Somalia ayaa Valencia ka hor iman doono ciyaartiisii ugu dambeeyey ee horyaalka uu ku dheelo Bernabeu.
Arbeloa waxa uu waqti waayihiisa ka mida la soo qaatay Liverpool balse waxa uu dib Real Madrid ugu soo laabtay Los Blancos isaga oo 152 kulan in ka badan matalay.
Kulankan waxa uu noqon doonaa mid dareen leh kabihiisana waxa ay xambaarsanaan doonaan afar farrin.
“Kooxdeyda,” “Nolosheyda,” “Hala Madrid,” “Wax dheeri ah m jiraan.”
Man United oo ay heysato ‘Labo daran mid dooro’…..(Jose Mourinho vs Ryan Giggs)
TOOS u daawo: AS Roma vs Chievo Verona - LIVE (Shaxda sugan)